11-ka Xidig Ee Ugu Fiicnaa Kulanka El Clasico-da Real Madrid iyo Barcelona Ee 20 kii Sanadood Ee Ugu Danbeeyay Oo La Soo Saaray? Xidigo Magac Wayn Leh Oo Boos Waayay. - Gool24.Net
11-ka Xidig Ee Ugu Fiicnaa Kulanka El Clasico-da Real Madrid iyo Barcelona Ee 20 kii Sanadood Ee Ugu Danbeeyay Oo La Soo Saaray? Xidigo Magac Wayn Leh Oo Boos Waayay.
Kulanka El Clasico-da ayaa ah kan ugu wayn heerka kooxaha ee kubbada cagta caalamka waana kulan sabab u noqday in tirada ugu badan ee daawadayaal ahi looga diwaan galiyo aduunka marka ay kooxaha Barcelona iyo Real Madrid iska hor yimaadaan.
Haddaba qiimayn lagu sameeyay ciyaartoydii ka soo muuqday kulanka El Clasico ee intii lagu jiray qarnigan 21 aad ee oo ka soo bilaamaysa 2000 kii ayaa la sameeyay waxaana iska dhex waayay ciyaartoy badan oo magac leh.
Waxaa lagu jiraa rubuc qarnigii ugu horeeyay qarniga 21 aad waxaana muddadan kulanka El Clasico ka soo muuqday ciyaartoy aad u tiro badan oo tayo sare leh taas oo aan suurtogal ka dhigayn in shaxda isku darka Real Madrid iyo Barcelona ee waqtigan ay ka soo wada muuqan karaan xidigaha ugu fiicnaa.
Qiimayntan waxaa lagu sameeyay Grosvenor Sport, waxaana lagu soo xulay 11 ka xidig ee ku soo baxay shaxda isku darka Real Madrid iyo Barcelona ee intii lagu jiray qarnigan 21 aad.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa shaxda isku darka Real Madrid iyo Barcelona ee qarnigan 21 aad ugu fiicnaa ee shaxdan ka soo wada muuqday iyada oo ay jiraan xidigo muran dhalin kara oo ka maqnaaday.
Haddaba halkan kaga bogo xogta oo faah faahsan iyo shaxda xidigaha ku soo baxay oo dhamaystiran.
Goolhaye: Iker Casillas, Real Madrid
Waxa uu Real Madrid u soo baxay 1999 kii isaga oo muddo 15 sanadood ah ku soo qaatay Real madrid isla markaana waqti badan ka soo qayb galay kulanka El Clasico-da ee Real Madrid iyo Barcelona.
Casillas waxa uu goolhayaha kowaad ee shaxda isku darka Madrid iyo Barca ee kulanka El Clasico loogu doortay saamayntiisii fiicnayd, kulamadii badnaa ee uu Madrid u soo ciyaaray iyo waliba doorkii uu ku lahaa waqtigiisii Bernabeu.
Difaaca Midig: Dani Alves, Barcelona
Dani Alves oo waayo ciyaareed oo cajiib ah qarnigan 21 aad ku soo qaatay Barcelona ayaa loo doortay difaaca midig ee ugu fiicnaa 20 kii sanadood ee ugu danbeeyay ee kulanka El Clasico-da waana xidiga ugu koobabka badan tariikhda kubbada cagta aduunka.
Alves ayaa 40 koob oo kala duwan haysta waxaana ku jira noocyo badan oo koobab ah iyada oo 23 ka mid ah uu kula soo guulaystay kooxda Barcelona oo uu 8 sanadood ku soo qaatay.
Difaaca Dhexe: Sergio Ramos, Real Madrid
Kabtanka hadda ee Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa ka soo muuqday shaxda isku darka ee kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee kulanka El Clasico-da. Ramos oo 34 sano jir ah ayaa 15 sanadood ku soo qaatay Real Madrid laakiin waxa uu wali sii wataa doorkiisa Bernabeu.
Ramos oo Real madrid u saftay 640 kulan oo uu 91 gool ku soo dhaliyay ayaa noqday mid booska difaaca dhexe ee shaxda isku darka El Clasico-da ka hor qaaday difaaca ay xifiltamaan ee Gerard Pique oo shaxdan iska dhex waayay.
Difaaca Dhexe: Carles Puyol, Barcelona
Qalbi difaacii ahna kabtankii hore ee Barcelona ee Carles Puyol ayaa Sergio Ramos kula bahoobay difaaca dhexe ee shaxda El Clasico-da qarnigan 21 aad.
Puyol ayaa Barcelona ku soo qaatay dhamaan 20 kii sanadood ee waayihiisa ciyaareed waxaana lagu diraa liiska ciyaartoydii abid ugu fiicnayd dalka Spain oo dhan isaga oo kooxda Barca iyo xulkiisa Spain koobab badan ka soo caawiyay.
Difaaca Bidix: Roberto Carlos, Real Madrid
Difaaca bidix ee shaxda kooxda El Clasico ugu fiicnayd qarnigan 21 aad waxaa ku soo baxay Roberto Carles kaas oo lagu tilmaamo difaacii bidix ee abid kubbada cagta ugu fiicnaa.
Carles oo koobka aduunka kula soo guulaystay xulkiisa Brazil ayaa Bernabeu ku soo dhaliyay 69 gool kadib markii uu kooxda cad cadka u ciyaaray 524 kulan.
Roberto Carlos ayaa booska difaaca bidix ka cidhiidhsaday Jordi Alba oo sanadihii ugu danbeeyay si shaki la’aan ah ugu soo baxayay shaxaha isku darka kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Carlos ayaa Real Madrid ku soo qaatay 11 xili cyaareed.
Khadka Dhexe: Xavi, Barcelona
Khadka dhexe waxaa shaxda isku darka Real Madrid iyo Barcelona ee qarnigan 21 aad ku soo baxay Xavi Hernandez oo ay hubaal tahay in shax kasta oo laga sameeyo taariikhda kulankan uu ku soo baxayo.
Waxa uu Xavi gabi ahaanba waayihiisa ciyaareed ku qaatay Barcelona isaga oo kooxda Catalonia soo matalay muddo 20 sanadood ah waana muddo u dhexaysay 1995 kii ilaa 2005 kii oo uu Camp Nou oohin ku macasalaameeyay.
Xavi oo loo tixgaliyo xidigii khadka dhexe ee kubbada cagta ugu fiicnaa ugu yaraan qarnigan 21 aad ayaa Barcelona u soo ciyaaray 769 kkulan wuxuuna soo dhaliyay 85 gool halka uu 184 gool caawin soo sameeyay.
Khadka Dhexe: Andres Iniesta, Barcelona
Hadii Xavi aragto waxaad ka ag eegtaa mataankiisii khadka dhexe ee Andres Iniesta. Kubbada cagta ayay jaho wareer ku soo abuureen muddadii ay Barcelona ka soo wada ciyaareen, laakiin si wada jir ah ayaa markale loogu doortay khadka dhexe ee kulanka El Clasico-da ee qarnigan 21 aad.
Iniesta oo ah xidiga kaliya ee haysta abaal marinta xidigii garoonka ugu fiicnaa ee finalada tartamada koobka aduunka, Champions league, koobka qaramada Yurub isla markaana saamayn xad dhaaf ah ku soo yeeshay kubbada cagta ayaa shaxdan ku soo baxay.
Andres Iniesta waa mid ka mid ah ciyaartoyda faro ku tiriska ah ee loogu sacabiyay Santiago Bernabeu inkasta oo uu xataa ciyaarayay kulanka El Clasico-da waana sabab uu uga mid yahay kuwii taariikhda kulankan ugu fiicnaa.
Khadka Dhexe: Zinedine Zidane, Real Madrid
Waxaa saddexda khadka dhexe ee kooxda El Clasico-da ugu fiicnayd qarnigan 21 aad dhamaystiray Zinedine Zidane oo hadda ah macalinka kooxda kowaad ee Real Madrid.
Tababare kasta ayay riyo u tahay in uu heli lahaa Zidane oo ciyaartoy ah, laakiin waxaa ka sii riyo badan in hal mar uu tababare isla heli lahaa Zidane, Xavi iyo Iniesta oo hal koox wada matala, laakiin hadda waxay ku soo wada baxeen shaxda kooxda El Clasico ugu fiicnayd qarnigan 21 aad.
Marka magaca Zidane la soo qaado xataa uma baahna sharaxaad iyo wixii uu kubbada cagta ku soo gaadhay balse waaa mid ka mid ah astaamaha kubbada cagta ee aan la ilaawi karin.
Riix 2 si aad uga sii bogato xidigaha shaxdan weerarka ugu soo baxay.
Awil - Ahmed says:
Xavi out Alonso keen shub ayay noqnlahyd
Ronaldinho out Ronaldo9 kee
Si weererku u ahdo messi cr7 iyo Ronaldo9
Keliya shaxda waan si sadaaliyey intanan aqrisan booskan qalday ayaa ah raul oo aad ronaldinho ka dhigtay